के तपाई मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ ? यो हो नेपालमा भर्खर आएको सस्तो स्मार्ट फोन « Janaboli
के तपाई मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ ? यो हो नेपालमा भर्खर आएको सस्तो स्मार्ट फोन
काठमाडौं । शाओमी, विश्वव्यापीटेक्नोलोजी लिडरले ३२ एमपी सेल्फीक्यामेरा भएको रेडमी वाई ३ नेपालमासार्वजनिक गरेको छ जसले पहिलो पटक रेडमी वाई सिरिजमाक्रियो आर्किटेक्चर ल्याएको हो ।
यस अवसरमाबोल्दै शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले भन्नुभयो, “हामी हाम्रो ग्राहकहरु माझ सबैभन्दा नयाँ रेडमी वाई ३ ल्याउन पाउँदा निकै उत्साहित छौँ ।
यो ३२ एमपी सुपर सेल्फीक्यामेरासँगै हाम्रा एमआई ग्राहकहरुले सेल्फीको अनुभव पुनःपरिभाषित गर्न सक्नेछन् । आश्चर्यजनक र प्रिज्म डिजाइनसँगै रेडमी वाई ३ ले अघिल्लो पुनरावृत्तिबाट महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ ।
क्वाल्कम स्न्यापड्रेगन ६३२ बाट संचालित तथा उच्च क्षमता भएको ४००० एमएएच ब्याट्रीसँगै यस स्मार्टफोनले नेपाली ग्राहकहरुलाई सुलभ मूल्यमा सबैभन्दा उत्कृष्टि नवीनतम प्रविधि ल्याएको छ ।” रेडमी नोट ७ सिरिजको उद्घाटनसँगै डिजाइनले रेडमी वाई ३ लाई र प्रिज्मसँगै बनाउन नयाँ आकार दिएको छ ।
रेडमी वाई ३ को पछिल्लो भागमा प्रिज्म जस्तै माइक्रो लाइन छ र यसको आकर्षक रंगले पक्कै बजारमा तहल्का मच्चाउने निश्चित छ । फोनको अघिल्लो भाग माकर्निङ गोरिलाग्लास ५ रहेको छ र मजबुत कर्नर तथा पीटुआइ न्यानो कोटिङले यस उपकरणलाई स्प्लेशस्हरुबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ ।
रेडमी वाई ३–३२ एमपी सुपर सेल्फी ः अघिल्लो रेडमी वाई सिरिजफोनले बनाएको विरासतलाई महत्वपूर्ण फड्को मार्दै, रेडमी वाई ३ ले ३२ एमपी सेल्फीक्यामेरा भित्र्याएको छ जसले आजका कन्टेन्ट क्रेटरहरुकालागि योग्य भएको ठहर गर्दै राम्रो स्थान बनाएको छ । तीव्र हाई रिजोलुसन सेल्फीदेखि ईआईएससँग फूल–एचडी भिडियोका लागि ३२ एमपीक्यामेरा विभिन्न ट्रिकको मास्टर हो ।
रेडमी वाई ३, ३२ एमपी सेल्फीक्यामेरा पाल्म सटर मोडमा उपलब्ध छ जसले प्रयोगकर्तालाई सामान्य रुपमापाल्मको इशारामा ३ सेकेण्ड टाइमर ट्रिगर गर्न सक्छन् । रेडमी वाई ३, ३ जीबी प्लस ३२ जीबी भेरियन्टका लागि रु १८,४९९ मा र ४ जीबीप्लस ६४ जीबी भेरियन्टका लागि रु २१,४९९ माएलिजेन्ट ब्लू, बोल्ड रेड र प्राइमब्लाककलरमा ६ मेईबाट देशभर ९०० भन्दा बढि अफलाइन स्टोर र डराज डटमा उपलब्ध हुनेछ ।
औरा प्रिज्म डिजाइन ः नविनतम सबै रुपमाआउन सक्छन्, र रेडमी लाइनअपमाभएको एक सबैभन्दानयाँविकास औरा डिजाइन हो । रेडमी वाई ३ माऔरा डिजाइनले मुर्त रुप दिन्छ तर फोनको पछिल्लो भागमा प्रिज्म जस्तै इफेक्ट, ढाँचामा चलिरहेको जटिल माइक्रो लाइनसँग रेडमी वाई ३ ले पहिल्लो यस सेग्मेन्टमा कहिल्यै नभएको कुरा ल्याएको छ ।